FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SHIBA INU - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Shiba Inu
'Ireto ny 2 Shiba Inus, Tobias (sesame mena 2 taona) ary Dozer (mainty sy mainty hoditra). Tena mpirahalahy izy ireo, manana ny reniny iray ihany. Tobias, ny sesame mena 2 taona ahy Shiba Inu dia tovolahy mangina, ary tena mahatoky sy be fitiavana. Tsy dia mivalan-kely izy, ary na dia olona voazaha toetra be aza izy matetika, dia tena niaro ahy sy Dozer zokiny lahy rehefa nahatsapa loza. Dozer, ny ahy Shiba Inu mainty hoditra sy mainty hoditra 1 taona dia mavitrika ary vonona hilalao foana. Izy ihany koa ilay alika mpiambina kely, indraindray 'maneno ny fanairana' alohan'ny hahatongavan'ny vahiny eo am-baravarana akory, na dia tsy mankahala olona mihitsy aza izy raha tsy mahatsapa loza. '
Lisitry ny alika mifangaro Shiba Inu
Alika kely Japoney kely
Ny Shiba dia alika kely kely. Mifanaraka amin'ny vatana ny loha. Ny vavam-borona boribory dia misy fijanonana antonony ary somary manakaiky ny orona ny savony. Mainty ny molotra tery sy ny orona. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny maso lalim-paka dia telozoro endrika ary mainty ny lokony. Mainty ny sisin'ny maso. Ny sofina miorina dia telozoro endrika ary kely raha oharina amin'ny ambin'ny vatana. Mahitsy ny tongotra eo anoloana. Dewclaws azo esorina. Ny rambony avo lenta dia matevina amin'ny fotony, miforitra ary entina any ambadika, na amin'ny peratra na miaraka amin'ny fiolahana fijaliana. Ny palitao dia avo roa heny miaraka amin'ny akanjo malemy sy matevina ary akanjo ivelany henjana sy mahitsy. Ny lokon'ny palitao dia tonga amin'ny mena, na mena misy takotra mainty kely, mainty misy marika mena, sesame misy marika mena, miaraka amin'ny crème, buff na palitao fotsy. Ny marika dia tokony hiseho eo amin'ny takolaka sy ny sisin'ny molotra, tenda, ambany ary tratra. Mety misy fotsy ny tongony, tendron'ny rambony ary ambonin'ny maso.
Mailo, matoky tena, be herim-po ary sahy ny Shiba. Fitiavana, tsara fanahy, trainable ary be herim-po. Madio izy io ary ezahina indrindra hisorohana ny puddles ary somary mora vaky trano . Somary mihombo kely izy ireo ary mifamatotra akaiky amin'ny mpikarakara azy ireo. Milalao sy mahafinaritra, Shiba voalamina tsara dia tsara amin'ny ankizy, alika hafa SY saka . Mavitrika, velona, ​​mailaka ary haingana. hifanerasera ity dia miteraka tsara toy ny alika kely, satria izy ireo dia azo natokana ho an'ny olon-tsy fantatra. Raha tsy resy lahatra tanteraka ny Shiba fa afaka mitantana ny fonosana mpitarika toerana ary mihevitra ny tenany ho mahery saina ho lasa somary maditra izy satria hino fa mila manamboatra ny lalàny manokana. Anarana serasera olombelona amin'ny canine tena ilaina. Alika mihaza voajanahary, ny Shiba dia tsy tokony hatokisana irery biby fiompy kely toy ny bitro , kisoa ginea , biby mpikiky SY vorona kely . Mitandrema rehefa esorinao izy ireo rehefa te hanenjika, indrindra raha tsy mihevitra ny tompony ho mpitondra entana matanjaka izy ireo. Mifanaraka tsara amin'ny dia. Alao antoka fa mafy orina ianao, azo antoka, tsy miovaova ity alika ity mpitarika , manome mandeha isan'andro ny fonosana hialana olan'ny fitondran-tena .
Haavony: Lehilahy 14 - 16 santimetatra (36 - 41 cm) Vavy 13 - 15 santimetatra (33 - 38 cm)
Milanja: Lehilahy 18 - 25 pounds (8 - 11 kg) Vehivavy 15 - 20 pounds (6.8 - 9 kg)
Mora voan'ny hip dysplasia, PRA ary famelomana patellar (kneecap solafaka).
Tsy maninona ny Shiba ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Izy io dia mavitrika mavitrika ao an-trano ary hahavita tsara indrindra amin'ny tokotany iray farafahakeliny. Miaro azy amin'ny hatsiaka sy mafana ny palitao an'i Shiba, tsy misy rano sy mafana, ka afaka miaina ivelan'ny trano izy io raha manana tokontany azo antoka halehibe araka ny antonony. Na izany aza, mihevitra ny tenany ho ampahany amin'ny fianakaviana izy ary tsy tia avela irery any ivelany. Ity karazana ity dia ho faly kokoa miaina anaty trano miaraka amin'ny fianakaviany.
Ny Shiba Inu dia alika tsy manam-paharoa izay hifanaraka amin'ny toe-javatra misy anao, raha toa ka mahazo isan'andro MANDEHANA . Alika miasa tokoa izy io ary ho salama sy ho sambatra kokoa amin'ny fanatanjahan-tena tsy tapaka. Ity karazana ity dia afaka mandeha an-tongotra mandritra ny ora maro satria maharitra izy io.
Alika kely 4 - 5 eo ho eo
Ny Shiba dia manana palitao madio, maditra, mafy hatoka, fohy volo ary mora karakaraina. Borosio amin'ny borosy vita amin'ny volombava mafy mba hanesorana ny volo maty ary handro raha tsy tena ilaina tokoa satria manala ny fanamainana voajanahary amin'ny palitao. Ity karazana ity dia mpantsaka mavesatra ara-potoana.
Ny Shiba no kely indrindra amin'ny karazana teratany Japoney, izay misy ny Kai Inu , Hokkaido Inu , Kishu Inu , Shikoku Inu , Tosa Inu ary ny Akita Inu . Na dia eo aza ny halehibeny kely kokoa dia nompiana izy hihaza lalao bibikely kely, orsa, lambo ary vorona manidina. Ny anarana Shiba dia midika hoe, 'kely' sy 'brushwood' amin'ny teny Japoney. Mety ho ny anaran'ilay tany nohajain'ireo alika na ny lokon'ny akanjo Shiba, na angamba ny haben'ny alika. Ny teny hoe 'Inu' dia midika hoe 'alika.' Toy ny karazany maro, ny Ady Lehibe Faharoa dia saika nahatonga ny fiompiana. Taorian'ny ady dia nisy fandaharam-piterahana maro niasa hamerenana ny zanak'omby amin'ny isa azo antoka. Ny Shiba dia iray amin'ireo karazany malaza indrindra eto Japon ankehitriny ary mahazo isa marobe any Etazonia. Ny Shiba Inu dia neken'ny AKC tamin'ny 1992. Ny talenta sasany an'ny Shiba dia misy: mihaza, manara-maso, manamboninahitra, miambina, mailaka ary manao fikafika.
Avaratra, AKC Tsy Fanatanjahantena
Baby Rocky ilay sesame mena Shiba Inu amin'ny maha alika azy amin'ny 3 volana
Edge, zanak'alika vavy Shiba Inu
'Aust. Ch. Torza dia mitaky tanteraka ny sasany, ' sary natolotr'i Trina sy Ian Kennard, Torza Shiba Inu Bichon Frize, Aostralia
Bluetooth ilay lahy Shiba Inu amin'ny faha-3 taonany
'Ity no Shiba Inu, Cooper. 2 taona izy ary tena mahaleo tena. Tiany ny mandeha hazakazaka tsara ary manara-dia azy tsara foana! '
'I Sushi ity dia alika kely mandritra ny 10 herinandro. Nahazo i Sushi nandeha farafahakeliny indray mandeha isan'andro . Mahazo fanatanjahan-tena koa izy amin'ny filalaovantsika saka 6 volana. Nijery ny Whisperer Dog miaraka amin'i Cesar Millan aho. Tena nividy DVD 3-andiany izay nojerenay ny alina nitondranay an'i Sushi mody. Ny filozofia iray izay ampiasaintsika isan'andro isan'andro dia ny fiezahana tsy hampientanentana azy amin'ny fotoana rehetra, indrindra rehefa tiantsika hanao zavatra izy na manala azy hiala amin'ny tranony. Ary rehefa mikororoka toa ny manaintaina izy dia tsy mamaly avy hatrany isika. Fantatsika avy amin'ireo DVD fa ny ankamaroan'ny fotoana dia hitsangana fotsiny ny alika ary handao azy io ary ny olona dia afaka mampitombo azy io amin'ny alàlan'ny fihoaram-pefy. '
Griffin ny Shiba Inu amin'ny fitsaharana
Gizmo the Shiba Inu puppy amin'ny tokony ho 3 volana sy sasany eo ho eo
Zahao ilay Shiba Inu mainty sy mainty hoditra 9 taona
Sadie the Shiba Inu amin'ny faha-4 taonany
Hijery ohatra hafa momba ny Shiba Inu
Shiba Inu Sary 1
Shiba Inu Sary 2
wheaten terrier sy poodle afangaro alika kely
mpiandry ondry alemanina sy afangaro malute
bernese tendrombohitra alika sy ny volamena retriever Mix
doberman alemanina mpiandry ondry mifangaro alika kely
boston terrier amerikana bulldog mix
tery omby fotsy sy fotsy
David leavitt taloha bulldogge anglisy